Sidee in ay tirtirto Bookmarks iPhone
1 click in ay tirtirto xog dheeraad ah oo shakhsi aad iPhone
Sida loo Delete xogta shakhsiga ku iPhone oo isticmaalaya Wondershare SafeEraser
Browser Safari ayaa aad iPhone yimaado la feature Bookmarks ku meelgaarka ahaa mid waxtar leh. Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku kaydiso websites si aad si fudud ku helaan iyaga karaa taariikh mustaqbalka ah. Inkasta oo ay jiraan siyaabo badan oo ay tani tahay mid waxtar leh, waxa kale oo aad gaari karaan Bookmarks aad u badan in aad ku adkaysato in aad awoodda kaydinta iPhone iyo sidaas daraaddeed hider kartiyeed. Dhibaatooyinkaasi waxay si fudud ayaa loo hagaajin karaa iyadoo la tirtirayo qaar ka mid ah haddii aanay wada Bookmarks aad. Halkan sida loo sameeyo tallaabooyinka u fududahay.
Tallaabada Koowaad : Open Safari oo markaas ka jaftaa icon Bookmarks.
Tallaabada Laba : Bookmarks aad All la soo daabici doonaa sida hoos ku qoran
Talaabada Sadexaad : in ay tirtirto mid ka mid ah liiska goobaha. Tubada on Edit ka dibna garaac icon jaray raacay by delete ah.
Waa sahlan tahay in ay tirtirto Bookmarks aad ka Browser Safari Laakiin hadii aad rabto in aad tirtirto macluumaadka gaarka ah ee kale? Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad this on your iPhone samayn kartaa si toos ah, laakiin waxa uu dhici karaa waqti dheer. Nasiib wanaag idiin, waxaa jira codsi in uu kuu ogolaanayaa inaad tirtirto xogta shakhsiga badan oo talaabooyin fudud hubinta waxaad badbaadin waqti badan.
Codsigan waxaa loo yaqaan Wondershare SafeEraser. Qaar ka mid ah qaababka ay ka mid ah;
• Kuu ogolaanayaa inaad si joogto ah loo fududeeyo qalab aad si aad si fudud ku iibin karaa ama waxaa dib oo aan ka walwalayn ku saabsan macluumaadka shakhsiga ah helitaanka gacmo qaldan.
• Dhammaan xogta aad doorato in aad tirtirto masaxayo sidan oo kale in ay tahay unrecoverable ah. Waxay hubisaa macluumaadka xasaasiga ah sida sirta ah iyo macluumaad tiirsaneeyd la ilaaliyo.
• Waxaad dooran kartaa in ay tirtirto qayb ka mid ah macluumaadka aad sida soo horjeeda tirtiro qalabka oo idil, sida farriimaha, iMessages, Call History, Xiriirada, Calendar, Bookmarks, sawiro iyo videos.
• siidaysay ilaa meel lagu kaydiyo ay kuu oggolaadaan in aad eegista masixi xogta qaar ka mid ah.
• Kuu ogolaanayaa inaad dadajiso qalab by nadiifinta oo dhan files junk.
Tallaabada Koowaad : download iyo rakibi SafeEraser si aad u computer. Orod barnaamijka iyo xiriiriyaan iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Waa in aad suuqa kala socda.
Tallaabada Labaad : furmo click aasaasiga ah ee "masixi Private Data"
Talaabada Sadexaad : Sida loo Delete Bookmarks on iPhone si toos ah u falanqeeyaan doonaa oo laga baarayo macluumaadka ku saabsan iPhone.
Tallaabada afaraad , xogta gaarka ah oo dhan ee qaybaha la soo daabici doonaa mar scan ku dhamaato. Fiiri sanduuqka ag nooca xogta aad jeclaan lahayd inaad masixi ka dibna riix "masixi Now."
Tallaabada shanaad : Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad gasho erayga "tirtirto" si loo xaqiijiyo in aad rabto in aad si joogto ah tirtirto dhammaan xogta ku saabsan qalab aad.
Waa in aad suuqa kala socda mar xogta oo dhan waa la tirtiray.
> Resource > iPhone > Sida loo Delete Bookmarks on iPhone